Ireo mpamorona an'i Siri dia handefa ny Viv, mpanampy manokana vaovao tsara lavitra noho i Siri | Avy amin'ny mac aho
Araka ny notaterin'ny The Washington Post, ny saina ao ambadiky ny famoronana an'i Siri dia manana tetikasa vaovao eo am-pelatanan'izy ireo. Ireo mpamorona an'i Siri Miasa amin'ny sendika vaovao vaovao antsoina hoe Viv izy ireo izay ho afaka hanao asa maro hafa noho Siri, Cortana na Google Now. Raha ny filazan'ny mpamorona azy dia io no "mpanampy" ilain'ny tsirairay fa tsy fanampiana tsotra izay tena voafetra ny fahaiza-mampiasa azy.
Dag Kittlaus sy Adam Cheyer mpamorona an'i Siri, dia ireo ihany izay niasa tamin'ny mpanampy vaovao vita batemy amin'ny anarana Viv. Raha ny marina, ny ampahatelon'ny mpiasa izay niandraikitra an'i Siri eMiasa ao amin'ny Viv izy ireo izao, taorian'ny nandaozany ny orinasa noho ny fahasamihafana misy eo amin'ny fampitaovana mety hananan'ny mpanampy Apple fa ny an'ny Cupertino dia tsy te hampiditra azy.
Viv dia lasa izay mety ho Siri ankehitriny. Kittlaus sy Cheyer dia nanomboka niasa tamin'ny Viv tamin'ny taona 2003, ela talohan'ny Siri. Viv dia mahavita manao asan-dahalo ary tsy afaka ary tsy ho vitan'i Siri amin'ny ho avy. Ny gazety Washington Post dia nahazo ny fitsapana an'ity virtoaly mpanampy vaovao ity afaka nanao pizza tamin'ny alàlan'ny mpanampy nefa tsy mila manoratra amin'ny fotoana rehetra na misintona fampiharana.
Viv dia tafiditra ao anaty rafitra miaraka amina fampiharana isan-karazany ary azo ampiasaina mihoatra ny famandrihana pizza fotsiny. Viv dia miditra amin'ny fiasan'ny rindranasa amin'izay tsy mila manokatra azy ireo isika vao afaka mampiasa ireo fiasa toy ny fangatahana fiara avy any Uber arakaraka ny toerana ahitantsika azy. Amin'ny lafiny sasany, ny Viv dia mitovy amin'ny fomba fiasan'ny Amazon Echo. Samy tafiditra ao anaty rindranasa izy ireo hahafahana mampiasa ny asany rehetra amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo fotsiny.
Toy ny lojika, orinasa lehibe toa Google sy Facebook dia efa liana tamin'ity tetikasa ity, saingy tsy nahatratra karazana fifanarahana izy ireo. Viv dia hanao fampisehoana ampahibemaso amin'ny alatsinainy ho avy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ireo mpamorona an'i Siri dia handefa ny Viv, mpanampy manokana vaovao tsara lavitra noho i Siri
Ny motera fikarohana Mac App Store nianjera nandritra ny ora vitsivitsy